SAWIRO: Shacabka Muqdisho oo bilaabay inay iskood isaga qaadaan qashinka | Wardoon
Home Somali News SAWIRO: Shacabka Muqdisho oo bilaabay inay iskood isaga qaadaan qashinka
SAWIRO: Shacabka Muqdisho oo bilaabay inay iskood isaga qaadaan qashinka
Shacabka degan hareeraha Isgoyska Fagax ayaa billaabay inay dayactirtaan wadada Fagax ka baxda ee aada dhanka Ex-Control Balcad, wadadan oo muddo ay fadhiyeen Biyo ka dhashay roobabkii ka da’ay Muqdisho.
Maamulka Gobolka Banaadir ayeey dadka ku eedeeyeen inay gabeen kaalintii ka saarnayd u adeegida Bulshada, iyaga oo sheegay inay bixiyaan Canshuur, balse aysan helin addeegyadii looga baahnaa Dowladda hoose.
Dadka Shacabka ee kunool Muqdisho ayaa bilaabay in ay is abaabulaan si dhibaatadda ay uga baxaan, Maadaama aysan muuqan Shaqadda dowladda Hoose ee Muqdisho.
Previous articleMahad Salaad “Iscafinta haddii ay dhab tahay waxaa la rabaa in loo fadhi Badasho”
Next articleMaxaad ka taqaan shirkadda xaraasheysa shidaalka Soomaaliya?
DAAWO:-Bandowga Puntland oo dadka qaar qabanaynin
Keydkii Hub ay lahaayeen Al Shabaab oo la helay+ VIDEO